‘क्रान्तिकारीलाई आतंककारी बनाउने प्रयास भयो’ « Naya Page
‘क्रान्तिकारीलाई आतंककारी बनाउने प्रयास भयो’
प्रकाशित मिति : 15 August, 2018 4:57 pm
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्यमाथि निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले कुटपिट गरेको समाचार ब्यापक भयो । अनलाइनहरुमात्र होइन, सोमबारका दैनिकहरुले पनि ट्रेड युनियनका नेताले उपसचिवमाथि हातपात गरेको कुरालाई उछाले । तर वास्तविकता के हो त ? संगठनका उपाध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, जुम्लाका साथीलाई जुम्लामै सरुवा गराउन पटक पटक जाँदा पनि काम नभएपछि सामान्य भनाभन भएको हो । मैले ऋषि सरलाई छोएको पनि छैन । यो निजामती कर्मचारी संगठनको एउटा गुटले मिडियामा मेराविरुद्ध मिथ्या प्रचार गराएका हुन् । ऋषि आचार्यमाथि कर्णालीका साथीको काम गर्ने क्रममा आवेशमा आएर भनाभन भएको कुरालाई कुटपिट भनेर भ्रामक प्रचार गरिएकोमा दुःख लागेको छ । प्रस्तुत छः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीसँग कुटपिटकाण्डको बारेमा छोटो संवादः
उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी
० तपाईले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कुट्नुभएकै हो ?
उपसचिवमाथि हातपात गरेको कुरा एकदम अनर्गल प्रचार हो । ऋषि सर भन्ने मात्र मैले थाहा पाएको थिएँ । ऋषि आचार्य भन्ने त मैले अनलाइनहरुमा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । म आधिकारिक ट्रेड युनियन जुम्लाका कोषाध्यक्ष नेत्र गिरीलाई सोही जिल्लामा सरुवाको लागि गएको थिएँ । आइतबार समेत म ३ पटक गिरीलाई जुम्लामै सरुवा गरियोस् भनेर गएको हुँ । म शिक्षा सेवाको कर्मचारी हुँ । सरुवाको बिषयमा ऋषि सरले ३ पटक बोलाउँदा कहिले चिठी लिएर आइज भन्ने त कहिले के भन्नुभयो ।
ऋषि सरसँग गिरीको सरुवाको बिषयमा सामान्य छलफल भएको हो । उहाँसँग छलफलका क्रममा गमला ढलेको हो । हातपात त के उहाँको शरीरमा छोएको भए म जुनसुकै संजाय भोग्न तयार छु । तर छुँदै नछुँदा पनि कुट्यो भनेर अनर्गल प्रचार गर्ने काम भएको छ । स्वयं ऋषि सरलाई पत्रकार साथीहरुले सोध्दा पनि थाहा हुन्छ । ऋषि आचार्यले जीवन भण्डारीबाट हातपात भएको भन्नुहुन्छ भने जस्तोसुकै कानुनी कारबाही भोग्न तयार छु । यो अन्त्यन्तै अनर्गल भ्रामक प्रचार गरिएको हो । मैले उहाँमाथि सरुवाको बिषयमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा सामान्य भनाभन भएको हो । मैले मालपोत, बैदेशिक रोजगार विभाग वा यातायातमा सरुवा गरिदेऊ भनेर कुनै भ्रष्टको सिफारिस गरेको होइन, जुम्लाको साथीलाई जुम्ला सरुवा गराउन खोज्दा जुन दुःख दिइयो, त्यसमा म होइन, जो भए पनि विवाद त भइहाल्छ ।
० तपाईले हातपात नै गर्नुभयो भनेर मिडियाबाजी भएको छ नि ?
म जुम्लाको मानिस हुँ । मेरो मिडियामा पहुँच छैन । कुट्नै नकुटी कुट्यो भनेर कसरी समाचार आयो, मलाई केही थाहा छैन । म अचम्मित छु । मलाई सोध्दै नसोधी समाचार लेखिएको छ । साथीहरुले फोन गरेर तेरो बारेमा यस्तो आएछ भनेपछि पो मैले थाहा पाएँ । मैले छुँदा पनि नछोएको र स्वयं ऋषि आचार्यले नै कुटेको होइन भनेपछि पनि किन लेखेका हुन् ? गर्र्दै नगरेको गल्तीका बारेमा भ्रामक समाचार आउँदा दुःख लागेको छ । क्रान्तिकारीलाई आतंककारी बनाउने प्रयासका रुपमा मैले बुझेको छु ।
० तपाईले कुट्दै नकुटेको बिषयमा कसरी समाचार आयो त ?
नेकपा.( साविक एमाले) भित्रको पनि गुटका कारण म भिक्टिम भएको हुँ । विशेषगरी भन्नुपर्दा म निजामती कर्मचारी संगठनमा जुन गुटमा छु, अको गुटले मेरा विरुद्ध यस्तो समाचार प्रवाह गराउने काम गरेको छ । साँढेको जुधाईमा बाच्छाको मिचाई भएको हो । मैले पैसा खाएर सरुवा गर्ने काम गरेको छैन । म त्यस्तो मानिस होइन । हामी कर्णालीका मानिसको माथिसम्म पहुँच छैन । कर्णालीका ट्रेड युनियन कर्मचारी साथीको समस्या लिएर म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएको हुँ । ३ पटक धाउँदा पनि नभएपछि किन भएन भनेर सोध्न पाउने अधिकार छैन ? यो घटनाबाट पनि कर्णालीबासी कति पीडित छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । हामी कर्णालीका मानिसको पहुँच कति कमजोर रहेछ भन्ने यसबाट पुष्टी भएको छ । मेरो सहसचिव, सचिवसँग पहुँच हुन्थ्यो भने जुन सामान्य भनाभन वा छलफल भयो, त्यो पनि हुँदैनथ्यो होला । कर्णालीका कर्मचारी साथीका काम गर्दा सामान्य भनाभन भएको बिषयलाई तिललाई पहाड बनाउने काम टेण्डरमा सरुवा गर्ने संगठनका गुटीयारहरुले गरेका हुन् । म संगठनको गुटको शिकार हुँदैआएको छु । मलाई संगठनको गुटले कांग्रेस समर्थक कर्मचारी प्रयोग गरी जुम्लाबाट खोटाङ सरुवा गर्दा पनि सहेरै आएको हुँ ।
उपसचिव ऋषि आचार्य
० खास भएको चाहिँ के हो त्यो दिन ?
मेरो भनाभन भएको खासगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग हो । एउटा सचिवसँग मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ त ? सचिवले मलाई कार्यकक्षमा बोलाइसकेपछि यस्तो घटना किन घट्यो, हाम्रा कर्मचारीले तपाईलाई दुःख दिए कि भन्लान् अभिभावकको नाताले भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । म एक निजामती कर्मचारी उहाँ मेरो अभिभावक हो । तर एकाएक उहाँले तँ तँ र म म गरेर मैले गुण्डागर्दी गरिस् भन्नुभयो । मैले कर्णालीको मानिसले कर्णालीमै जान्छु, जिल्लामै जान्छु भन्दा म कर्णाली भन्दा पनि दुर्गमको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिनुभयो । समस्यामा सचिव समस्यामा आउँदैआउनुभएन । गालीगलौजमा उत्रिनुभयो । सचिवसँगको संवाद सुन्ने पत्रकार समेत रहिसकेका जगत नेपाल, संगठनका पूर्वपदाधिकारीहरु सबै छन् । सचिव थपलियालाई हामी शिक्षासेवाका कर्मचारीसँग एउटा इगो रहेछ । हामीले मुख्यसचिवसँग शिक्षा सेवाका कर्मचारीको ब्यवस्थापनको कुरा गरेका थियौं, म माथिको सचिवको दुब्यर्वहार त्यसैको प्रतिशोध हो । ऋषि आचार्यले अहिले पनि भन्दै हुुनुहुन्छ मलाई कुटेकै होइन भनेर । किन यति विधि बबरन्डर मच्चााइएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।
० पहुँच र प्रभाव नभएका कर्णालीलगायतका जिल्लाका कर्मचारीप्रति उच्च प्रशासकहरुको दृष्टि सकारात्मक छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, एकदम नकारात्मक छ । मैले कर्णालीको जुम्ला घर हो, त्यहींको गाउँपालिकामा जान्छु भन्दा पनि जान नदिने भन्दाखेरी कस्तो होला ? कुनै कर्मचारीको ३–४ पटक सरुवा भएको छ त भन्दा सचिवले ५१ पटक सरुवा गर्छु मुद्दा हाल भन्नुभयो । सचिव थपलिया अति तल्लो स्तरमा ओर्लिएर प्रस्तुत हुनुभयो । म ऋषि आचार्य सरसँग विवाद गरेकोमा माफी माग्थें, तर सचिवको ब्यवहारका कारण मलाई थप दुःख लाग्यो । सचिवले मिलाउने भन्दा पनि भड्काउने काम गर्नुभयो ।